Izinga eliphezulu e-Jardim Goiás - I-Airbnb
Izinga eliphezulu e-Jardim Goiás
Jardim Goiás, Goiás, i-Brazil
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Rebeca
U-Rebeca Ungumbungazi ovelele
I-loft entsha, eqedwe izinga eliphezulu kuthayela we-porcelain onamakhabethe akhelwe ngaphakathi.
Ikhishi eligcwele, elinemishini eminingana, lilungele noma ubani ofuna ukupheka.
Ifulethi linesimo somoya, i-TV kanye ne-WiFi yesivinini esikhulu (400 Mb).
Ngihlinzeka ngazo zonke ilineni nezinto eziyisisekelo njengensipho, iphepha lasendlini yangasese, amathawula nelineni yombhede.
Izivakashi ziyakwazi ukungena kulo lonke ifulethi.
Ukufinyelela kalula (ngezinyawo/ukudlulisa) ku-Shopping Flamboyant (ukuthenga okukhulu nokuhamba phambili esifundazweni), i-Parque Flamboyant (indawo ebalulekile yezivakashi edolobheni) kanye ne-Feira do Cerrado (imisebenzi yezandla ngamaSonto).
Indawo ephezulu itholakala endaweni eyinkimbinkimbi enendawo yokuzivocavoca, i-spa, indawo yokugunda izinwele, amakhefi amaningana nezindawo zokudlela ezifana ne-Artesano Pizzeria, i-Óri (ukudla kwamaJapane), i-Steak inn (izikebhe), i-hamburger ye-Lifebox namabha anjenge-Zimbro ne-Birras e Tapas.
Kunezitolo ezinkulu eziseduze ezifana neSam’s Club, Big, Carrefour kanye ne-Oba Hortifruti.
Kukhona ihabhu ye-gastronomic enezindawo zokudlela namabha afana ne-Tartuferia San Paolo, i-Mercatto, i-Coco Bambu, i-Pobre Juan, i-Empório Piquiras, i-L'Entrecôte de Paris, i-Outback, i-Madero ne-Kanpai Blue.
Eduze kwe-UNIP kanye ne-FASAM University.
Emaphathini, indawo nayo inhle: eduze neSerra Dourada Stadium (Villa Mix) kanye no-Oscar Niemeyer.
Será um prazer receber você! Estou sempre disponível para tirar qualquer dúvida!
Ngiyatholakala ukuthi ngiphendule noma yimiphi imibuzo ocingweni.
URebeca Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Jardim Goiás namaphethelo